Nyanzvi yezvepfungwa, zita repamba rinozokuchengetedza wakasungwa kusvika kumagumo | Zvazvino Zvinyorwa
Bhuku Nyanzvi yezvepfungwa (rakaburitswa muchiSpanish muna2020) inoverengeka nemuongorori weNorway uye wezvepfungwa Helene Flood. Iye munyori, wepasi rose anozivikanwa nekuda kwezvidzidzo zvake zvechisimba nekushungurudzika kwepamberi, akashandisa ruzivo rwake sechiremba kugadzira izvi mhuri Noir Nordic.
Sekureva kwezita rako, Chiremba —Zita rekutanga muchiNorway— Ndicho thriller zvepfungwa apo kunyengera kunogara kuri chinhu. Muchokwadi, chinyorwa chine zano rekurwisa iro rinoburitsa pachena (uye kujekesa, dzimwe nguva) kunzwa kuti munhu wese ari kunyepa. Nechikonzero ichi, protagonist wenyaya haagoni kuvimba chero munhu ... kunyangwe ndangariro dzake
1.1.1 Nenzira, chii chinonzi noir yekumba?
2 Kupokana uye pfupiso yeiyo Psychologist
2.2.1 Kushatiriswa nendangariro
3 Kuongorora kwepfungwa dzepfungwa
3.2.1 Ichokwadi here?
3.2.2 Iyo nhema seyakarondedzerwa tambo
Helene Mafashama Aakvaag (Norway, 1982) ndiye chiremba mune zvepfungwa akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeOslo. Pari zvino, Anoshanda seMuongorori Mukuru kuNorway Knowledge Center paChisimba uye Kushungurudzika Kunetseka (NKVTS).
Mune yambotaurwa sainzi institution, Akapedza kudzidza kwake kwechiremba, inoongorora mhedzisiro yemhirizhonga muzviitiko zvekutambudzwa zvakare uye mhosva inoshungurudza. Aya madingindira anotsanangurwa zvakajeka mukukudziridzwa kwebhuku Nyanzvi yezvepfungwa, Iyo kukura kunoratidza kushanda uye kusimba kwendangariro dzevanhu.
Kunze kwezvinyorwa zvake zvakawanda uye zvinyorwa zvesainzi, Helene Mafashama has kune mbiri yake zvinyorwa zviviri zvinyorwa zvisati zvaitika Nyanzvi yezvepfungwa. Idzi ndidzo nyaya dzevechidiki Elevator neHoudini (2008) uye chinyorwa chakakurumbira chesainzi Mhoro, zvinonyadzisa (2018). Zvino, pasina kupokana, kubudirira kwe Chiremba inoita kunge inofungidzira ramangwana rakavimbiswa semunyori wenyaya yematsotsi.
Saizvozvowo, kuvandudzwa kwe Nyanzvi yezvepfungwa yakafananidzwa nevatsoropodzi nemamwe mazita anotengesa zvakanyanya kubva pamba noir. Pakati pavo, Zumbido (2012) naGillian Flynn, Mukadzi akanyarara (2013) naASA Harrison uye Musikana ari muchitima (2015) naPaula Hawkins. Kunge mabhuku ataurwa, chinja kugirazi hombe re Nyanzvi yezvepfungwa (kodzero dzakatengwa naSony).
Nenzira, chii chiri pamba noir?
Ndicho izwi rakagadzirwa (zvinoenderana nenzvimbo zhinji) na Julia Crouch muna 2013. Izvi zvinotsanangurwa se musiyano wekupara mhosva kana chakavanzika, umo ma protagonists ayo ari "vaongorori vepamba" kana "akajairwa matikitivha." Kunyangwe iri subgenre iri mufashoni nhasi, yaive ichinyanyo shandiswa nevanyori vakaita saAgatha Christie kana Stephen King.
Kupokana uye pfupiso ye Nyanzvi yezvepfungwa
Murume waSara, Sigurd, anomusiira katsamba kekuteerera achangosvika kukamba yenyika kwaaizopedza vhiki. Anofanirwa kusangana nedzimwe shamwari ipapo, zvisinei, hapana mumwe wavo amuona uye vanofunga zvekuyambira Sara nezve mamiriro ezvinhu.
Ipapo, mibvunzo inotanga kubhururuka pamusoro pemhepo, kunyanya iya ine hukama neshoko rezwi. "Sei usingauye?" Mubvunzo unoramba uripo mupfungwa dza Sara. Pakupedzisira, mapurisa anomuronga semunhu mukuru anofungidzirwa mukushaikwa kwaSigurd nepo achitenda kuti murume wake anonyepa.
Sezvo nyaya yekushaikwa kwemurume wake ichienderera mberi, maitiro aSara anochinjawo. Ikoko, protagonist anoenda uye anoshandisa ekurapa kuvanhu (vachiri kuyaruka, kunyanya) nekuzvidya mwoyo, kushushikana uye kusagadzikana kwekuzviremekedza. Kunyange, hofisi imwezve hunhu, nekuti marongero ezvinhu zviripo ipapo zvinopedzisira zvave zvakakosha kune ndangariro dzepfungwa.
Gare gare, apo Sigurd anoita kunge afa, kutya kukuru kwaSara kunosunungurwa. Panguva iyoyo, chiremba anoshungurudzwa neruzivo rwake. Sezvo iye achiziva nenzira iyo iyo uropi inoshandisa kunyepa senzira yekuzvidzivirira ... Kana paine chakavanzika chakachengetedzwa kwazvo, imhaka yemhedzisiro yekuchizarura.
Sezvo zviitiko zvinosvika kumagumo, kusavimba kwaSara kunowedzera zvishoma nezvishoma kusvika pamwero usingaite.. Nekuda kweizvozvo, anonzwa kusagadzikana pamusoro pevarwere vake, mazwi emurume wake uye, zvakatoipisisa, ndangariro dzake ... Mukati memoyo, Sara anoziva kuti ndangariro dzinogona kuzadza nekunyepedzera kwekubvisa kwaanofunga kuti hakuenderani.
Analysis of Nyanzvi yezvepfungwa
Nyanzvi yezvepfungwa Ndicho nhema nhema zvakanyanya mukuenderana nenguva dzekuvharirwa mudzimba ruzivo munyika zhinji dzepasi kubva 2020. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti, kunyangwe bhuku racho rakaburitswa gore iro, kuvhurwa kwayo kwakaitika nguva pfupi iyo mamiriro ehutano asati akonzerwa.
Nyanzvi yezvepfungwa (Planet ...
Kufanana pakati paSara, protagonist webhuku, naHelene Mafashama zvinonzwisisika (vese vari vepfungwa). Pamusoro pe, wekutanga-munhu rondedzero pamwe nekugona kwesainzi kwemisoro yakaongororwa kunobatsira kusimbisa iwo mafungiro. Zvakare, zvinoita sekunge zviitiko zvakatsanangurwa zvinoenderana zvakananga nezvakaitika chaizvo nemunyori.
Mutambo wakasangana naSara, kunyangwe uchinge uri wekunyepedzera mune zvakasikwa, ine hwaro hwesainzi hwakafundwa zvakanyanya naHelene Mafashama. Chaizvoizvo chiremba anopedzisira avhara muverengi mukunzwa kwekusavimba zvakakwana, zvinonzwisisika? Icho chikonzero: sainzi yakaratidza kuti inokatyamadza sei ndangariro yemunhu mumamiriro anoshungurudza.
Panyaya iyi, Mafashama ataurwa mubvunzurudzo ye Pepanhau (2020): "Dzimwe nguva isu tine chokwadi chekurangarira asi hazvireve kuti ichokwadiIsu tinowanzozvigadzira kuti nhoroondo yedu ibatane, uye ndangariro yedu inobvisa zviri nyore zvinopesana nazvo. Hazvisi pachena kuti tinofanira kuvimba nendangariro dzedu ”.
Iyo nhema seyakarondedzerwa tambo
Mafashama anoshandisa chirevo chakareruka chine kutaurirana kwakabatana uye kumwe kusvetuka munguva. Akati analepsis (zvipenga) ndidzo dzinonyanya kurangarira Sigurd (pavakasangana, kuvandudza kwehukama hwavo uye shanduko yavo kusvika zvino). Ehezve, iyo yakasarudzika yekubata kweruzivo ndeye kutsanangurwa kwakadzama kwemafungiro epfungwa evatambi.
Panguva iyoyo, manyepo ndicho chinhu chiri pachena kuti chinonyanya kufadza munyori, uyo anotsigira nesainzi nharo yake nechirevo chinotevera: “Kune nzira dzakawanda dzekureva nhema, nhema chena, kunyepa kuzvidzivirira pakuita chinhu chakaipa kana kufinyirwa, kuzvinyengera, kunyepera izvo zvinofungidzirwa kuti ndizvo zvakanaka apo zvazviri kuita kukuvadza kwakawanda ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Bhuku rezvepfungwa